Manao Vela-Tsehatra Momba Ny Media Marolafy Amin’ny Fiteny Miskito sy Mayangna Ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2016 15:27 GMT
Tamin'ny fiafaran'ny tetikasa “Miskito sy Mayangna ao amin'ny aterineto,” nikarakara fifanakalozan-kevitra roa ny mpianatry ny Sekolin'ny Fitarihana Olona mba hampisehoana ny vokatr'izy ireo farany amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'ny Faritra Mizakatena ao amin'ny Morontsiraka Karaiba Nikaragòana (URACCAN).
Nandritra ny fifanankalozan-kevitra voalohany tao amin'ny Sekolin'ny Fitarihana Olona, lahatsary telo no naseho: “AIDS wal iwanka (SIDA)“, “Bullying (Fampitahorana)“, ary ny “Fanavakavahana Ara-Poko“. Narahina fifanakalozan-kevitra mikasika ny lohahevitry ny lahatsary sy ny fomba ifandraisany amin'ny fianarana ny fiarahamonina sy ny fiaranarana ny toetsaina ny fandefasana horonantsary, ary ny maha zava-dehibe ny fampiasana ny teny Miskito sy Mayangna eo amin'ny indray mihira vaovao ao amin'ny vondrom-piarahamonina manodidina ny Morontsiraka Karaiba Avaratra ao Nikaragòa.
Tamin'ny fifanakalozan-kevitra faharoa no nampahafantarana ireo rakibolana telo teny miisa anankiroa: “Yala” sy “Slilma Diara Nani Nina“. Nampahafantarina ihany koa ny sarimiaina antsoina hoe “Pamali Painkira” sy ny tranonkalan'ny tetikasa. Nanazava ireo mpianatra ao amin'ny Sekolin'ny Fitarihana Olona fa zava-dehibe ny fampandrosoana ireo fitaovana [votoaty] nomerika amin'ny teny Miskito sy Mayangna ireo satria tsy mbola misy ny fandaharana fialam-boly amin'ny fahitalavitra amin'ireo fiteny ireo. Mifandraika amin'ny famoronana rakibolana nomerika, nanazava ny sasany tamin'ireo mpampianatra fa nentim-paharazana ny fampitana am-bava ny teny indizeny ao an-toerana, ka fomba iray hanohanana ny fampandrosoana ny lovan-tsofina ny manampy tahirim-peo hanaovana rakibolana nomerika telo teny, ary koa hampiroboroboana ny fahaizana manoratra amin'ireo fiteny roa ireo, tahaka ny nanaovana azy amin'ny teny espaniola sy teny anglisy.